မေစစ်ပိုင် – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Sun, 08 Nov 2020 12:19:48 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.3.6 သူတို့ နိုင်ငံသားတာဝန်ကျေခဲ့ပြီ https://burma.irrawaddy.com/article/2020/11/08/233025.html Sun, 08 Nov 2020 12:19:02 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=233025
မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် နေရာများစွာမှာ မည်သည့်ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနိုင်မလဲ။ တိုင်းရင်းသား မဲဆန္ဒ နယ်မြေတွေကလည်း တိုင်းရင်းသားအသံတွေကိုယ်စားပြု ထွက်ပေါ်လာဖို့ ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အနိုင်ရ လာမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
The post သူတို့ နိုင်ငံသားတာဝန်ကျေခဲ့ပြီ appeared first on ဧရာဝတီ.
ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ပြည်သူလူထု အများစုဟာ သူတို့အတွက် အားကိုးအားထားရမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဆန္ဒမဲ ပေးဖို့ မဲရုံစတင်ဖွင့်မယ့် မနက် ၆ နာရီ မတိုင်ခင်ကတည်းက တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလမို့ ဆန္ဒမဲ လာရောက်ပေးမယ့်သူ နည်းပါးနိုင်တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေး အသိုင်း အဝိုင်းတွေက သုံးသပ်ခဲ့ကြပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ နိုင်ငံအဝှမ်းက နေရာအများအပြားမှာ ဆန္ဒမဲ ပေးသူများစွာဟာ ကိုဗစ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ အညီ လာရောက်ကြကာ မဲရုံပိတ်ချိန် ညနေ ၄ နာရီမတိုင်ခင်အထိ ဆန္ဒမဲတွေ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ တာမွေမြို့နယ် ကျားကွက်သစ် ရပ်ကွက်မဲရုံမှာဆိုရင် မဲလာပေးသူတွေဟာ မနက် ၈ နာရီဝန်းကျင်မှာပင် လူ ၁၀၀ ဝန်းကျင် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြတာ တွေ့ရပြီး၊ မဲရုံအတွင်း မဝင်မီ ၎င်းတို့ တပ်ဆင် ခဲ့တဲ့ Mask တွေအစား N 95 Mask များ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်စေတာ၊ လက်သန့်ဆေး ရည်သုံးစေတာတွေကို ပြုလုပ်ပေး ကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မဲဆန္ဒပြုဖို့ လာရောက်ခဲ့သူ တာမွေမြို့နယ်နေသူ ၁ ဦးကတော့ “လူထုအသံကို ကိုယ်စားပြုပေးနိုင်မယ့်သူတွေကို ရွေးချယ် ခဲ့ပါတယ်” လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပြပါတယ်။
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိတဲ့ ဧရာဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်က တပ်မတော်သားတွေနဲ့ မိသားစု ဝင် အများစု လာရောက်မဲပေးရာ မဲရုံ အမှတ် ၅ မှာ ဆိုရင် မဲလာပေးသူအများစုဟာ Mask၊ ခေါင်းစွပ်နဲ့ လက်အိတ်တွေ ဝတ်ဆင်ကာ လာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ အင်တာဗျူးဖြေဖို့ ငြင်းဆန်ကြပါတယ်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်အတွင်း ဆန္ဒမဲပေးရန် စောင့်ဆိုင်းခဲ့သည့် ပြည်သူများ/အောင်ကျော်ထက်/ဧရာဝတီ
အဲဒီ တပ်မဲရုံမှာဆိုရင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်း ၁၈၀၀ ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပါတီ ၅ ခု၊ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အဆင်ပြေစွာ မဲပေးနိုင်ကြတဲ့ မဲရုံတွေ ရှိသလို မဲတံဆိပ်တုံး အတုပြုလုပ်မှု၊ တိုင်းရင်းသား အချို့ မဲပေးခွင့်မရတဲ့ ပြဿနာ အပါအဝင် မဲမသမာမှု ဖြစ်စဉ် အချို့လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အစင်စံပြကျေးရွာမှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) တံဆိပ်တုံးနဲ့ ပုံစံဆင်တူတဲ့ တံဆိပ်တုံး အတု ယူဆောင်လာသူကို ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ အစင်စံပြကျေးရွာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲထံမှ သိရပါတယ်။
ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁၂၉၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်မှာတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအချို့ တိုင်းရင်းသား ရေးရာ မဲပုံးမရှိတာကြောင့် မဲပေးခွင့်မရတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ တာကလေးမြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ မဲရုံအမှတ် ၄ မှာလည်း နိုင်ငံရေးပါတီတခုက ထုတ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ မဲစာရင်းစာရွက်အတု ယူဆောင်လာကာ အမျိုးသား ၁ ဦးက လာရောက်မဲပေးမှုလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုပြဿနာတွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာ မဲပေးသူ လာရောက်မှုများပြားတဲ့ မဲရုံတွေမှာတော့ မဲရုံအတွင်းကို လူ ၃ ဦး တလှည့်၊ ၅ ဦး တလှည့် စသည်ဖြင့် Social Distancing အရ မဲပေးစေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ဇေယျာသီရိ ကုန်တိုက်ရှိ မဲရုံ အမှတ် ၁ တွင် ဆန္ဒမဲပေးခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်/သီဟလွင်/ဧရာဝတီ
“ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူထဲက ပြည်သူပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီး ဝိုင်းပြီး တည်ဆောက်ကြမယ်ပေါ့။ အများကြီး ကောင်းလာမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်”လို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်က မဲရုံ ၁ ရုံမှာ ဆန္ဒမဲလာပေးသူ တဦးက ပြောပါတယ်။
ပြည်သူအများစု ပြောပြချက်တွေအရ ကိုဗစ်ကာလမှာ သူတို့ကို ရောဂါပိုး ကူးစက်မှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ရှိကြပေမယ့် နိုင်ငံ သားတာဝန်ကျေပွန်ဖို့ လိုအပ်တာ၊ ပြည်သူကိုယ်စားပြု အစိုးရ တရပ် ပေါ်ထွက်လာဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် စိုးရိမ်မှုတွေ ကြားကနေပဲ လာရောက်မဲပေးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ၁ ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ PEACE မှ စိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်က “မဲရုံတွေကို အချိန်မီ ဖွင့်လှစ်နိုင် ခဲ့သလို ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေကိုပါ ပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲနဲ့ မဲရုံ တာဝန်ရှိသူတွေ အားလုံးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ယနေ့ ညနေပိုင်းက အဖွဲ့ရဲ့ ကနဦးအစီရင်ခံစာ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။
အဲဒီ ကနဦးအစီရင်ခံစာမှာ မဲရုံမှူးများရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံဟာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပြီး မဲရုံအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းကလည်း အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ထို့အပြင် မဲရုံ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ကိုဗစ် သံသယရှိသူ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပူချိန် မြင့်မားသူတွေအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန် သီးခြားအခန်း သို့မဟုတ် သီးခြားနေရာ စီစဉ်ထားတာကို တွေ့ရကြောင်း၊ မဲရုံအားလုံး (၉၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) မှာ ကိုဗစ် ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်တွေ သိသာထင်ရှားစွာ ကပ်ထားကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အချို့ မဲရုံတွေမှာ ပြည်သူတွေပေးခဲ့တဲ့ ဆန္ဒမဲတွေကို ဖွင့်ဖောက်ကာ ရရှိတဲ့ဆန္ဒမဲတွေကို ရေတွက် နေကြ ပါပြီ။
တပ်မဲရုံ တခု ဖြစ်တဲ့ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်ထဲက အနော်ရထာရပ်ကွက် မဲရုံ အမှတ် ၈ မှာတော့ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၃၀၀ အနက် NLD ပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ ၃ မဲ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာ ၆ မဲရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး ရေးပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ ၂၃၇ မဲနဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော်နေရာ ၂၅၁ မဲ ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဇေယျာသီရိမြို့နယ် မဲရုံအမှတ် ၁ မှာ ဆန္ဒမဲလာရောက်ပေးခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်း အောင်လှိုင်ကို ဧရာဝတီသတင်းထောက် ကိုထက်နိုင်ဇော်က မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ “ကျနော်ကတော့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာ ဒီအပေါ်မှာ အလေးထားတဲ့ ပါတီပေါ့နော်။ နောက်တခါ ဒို့တာဝန် အရေး ၃ ပါးကို အလေးထားတဲ့ ပါတီ ပေါ့။ ကျနော် အမြဲတမ်းပြောတယ်။ ကျနော်တို့ တပ်မတော်နဲ့ လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်လို့ ရတဲ့ပါတီကို ကျနော် ရွေးချယ်ပြီး ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့လည်း ကျနော် အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ်။” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာ တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက် မဲရုံ တရုံတွင် ကိုဗစ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်စဉ်/ထက်ဝေ/ဧရာဝတီ
ဇေယျာသီရိမြို့နယ်ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက အနိုင်ရ ခဲ့ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) က အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နေရာ တခု ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းကင်းမြို့နယ် တောင်တွင်းဒေသ ဇနပုဒ်ရွာမှာတော့ NLD ပါတီက ၇၀ မဲ၊ USDP က ၂၇ မဲ ၊ ငအုံးကျေးရွာမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက် NLD က ၁၆၁ မဲ၊ USDP က ၂၆ မဲ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် NLD က ၁၆၈ မဲ၊ USDP က ၂၄ မဲနဲ့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၁ အတွက် NLD က ၁၅၄ မဲ၊ USDP က ၂၄ မဲ ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဗေဒါအင်စတီကျူ့ရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်းက သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ည ရောက်သည်အထိ ပြည်သူတွေပေးခဲ့တဲ့ ဆန္ဒမဲတွေဟာ မဲရုံအလိုက် ရေတွက်နေဆဲ ဖြစ်တာကြောင့် အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ် နာမည်တွေကိုတော့ သေချာ မသိရှိရသေးပါ။
ယခု ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကလို NLD ပါတီက သောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်မလား၊ ၂၀၁၀ ကာလက အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီကြီး တခုဖြစ်တဲ့ USDP ပါတီက နိုင်မလား၊ မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် နေရာများစွာမှာ မည်သည့်ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနိုင်မလဲ။ တိုင်းရင်းသားမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကလည်း တိုင်းရင်းသားအသံတွေကိုယ်စားပြု ထွက်ပေါ်လာဖို့ ဘယ်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းတွေ အနိုင်ရလာမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလထဲမှာတောင် နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးဆုံး အလုပ်တခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံသားများစွာကတော့ သူတို့ရဲ့ တာဝန်ကျေခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
]]> ရဲရာထူးခန့်ချုပ်ကို လိင်အမြတ်ထုတ်မှုဖြင့် ထောင်ချ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/07/04/225740.html Sat, 04 Jul 2020 04:34:39 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=225740
လက်အောက်ငယ်သား ရဲမေကို ရာထူးတိုးပေးမည်ဟု အပေးအယူပြု၍ လိင်အမြတ်ထုတ်မှုဖြင့် တိုင်ကြားခံရသူ ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ရဲမှူးချုပ်ဇော်မိုးသန်းကို ရဲတရားရုံးက ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့တွင် ပြစ်ဒဏ်ပေး ထောင်ချလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သတင်းရရှိသည်။
The post ရဲရာထူးခန့်ချုပ်ကို လိင်အမြတ်ထုတ်မှုဖြင့် ထောင်ချ appeared first on ဧရာဝတီ.
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲမှူးကြီးကျော်သီဟ က “အခုက အပြစ်ရှိလို့ ရဲတရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တာပါ။ တိုင်ကြားထားတဲ့အမှုနဲ့ပဲ ချလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ မနေ့က(သောကြာနေ့)ပါ။ ရမည်းသင်းထောင်ကိုပါ”ဟု ဧရာဝတီသို့ အတည်ပြုသည်။
ရဲတရားရုံးမှ ရာထူးခန့်ချုပ် ရဲမှူးချုပ်ဇော်မိုးသန်းကို ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ပြစ်ဒဏ် အတိအကျကိုမူ အသေးစိတ်မသိရှိရသေးကြောင်းလည်း ၎င်းကပြောသည်။
တိုင်ကြားမှုမှာ မူလက ရေနံမြေရဲတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ရဲမေ ၁ ဦးတည်းဟု သိရှိရသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ရဲမေ ၈ ဦးတိုင်ကြားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အသိုင်းအဝိုင်းမှသိရှိရပြီး ယခုချမှတ်သည့် ပြစ်ဒဏ်သည် မည်သို့ ဆုံးဖြတ်ချမှတ်သည်ကို ဧရာဝတီက စုံစမ်းဆဲဖြစ်သည်။
တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦး က “အရေးယူပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။ ပြစ်ဒဏ်ကိုတော့ချိန်ရမှာပေါ့။ မျှတမှု ရှိ၊ မရှိက သီးခြားစဉ်းစားရမယ်။ ကာယကံရှင် ရဲမေတွေကလည်း သီးခြားရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေတွေအရ၊ တရားမကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိသေးတယ်”ဟု ထောက်ပြသည်။
ရဲရာထူးခန့်ချုပ်၏ လိင်အမြတ်ထုတ်ကြောင်း တိုင်ကြားမှုကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ် ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများထံ တင်ပြခဲ့ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက မီဒီယာများသို့ ဇွန်လအတွင်းက ပြောကြားထားသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအထိ ရဲအရာရှိ ၂၈၁၇ ဦး၊ အခြားအဆင့် ၆၇၃၀ ဦးတို့ကို ပြစ်ချက်အမျိုးမျိုး အရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအရေးယူမှုများထဲတွင် ရဲအရာရှိ ၁၉ ဦးကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ အရ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
]]> လိင်အမြတ်ထုတ်မှုနဲ့ ရဲရာထူးခန့်ချုပ် စစ်ဆေးခံနေရ https://burma.irrawaddy.com/article/2020/06/25/225274.html Thu, 25 Jun 2020 09:47:17 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=225274
ရဲအသိုင်းအဝိုင်းက ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ရဲမှူးချုပ် ဇော်မိုးသန်းကို နေပြည်တော်က ရဲအချုပ်မှာပဲ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
The post လိင်အမြတ်ထုတ်မှုနဲ့ ရဲရာထူးခန့်ချုပ် စစ်ဆေးခံနေရ appeared first on ဧရာဝတီ.
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲအကြီးအကဲ တဦး ၎င်းရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အသုံးချကာ လက်အောက်ငယ်သား ရဲမေ တဦးကို ရာထူးတိုးဖို့အတွက် အပေးအယူအနေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး တိုင်ကြားခံထားရပါတယ်။
ဇွန် ၂၂ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရဲအကြီးအကဲရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုကို တိုင်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စအပေါ် စစ်ဆေးနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲဗိုလ်ချုပ် မျိုးဆွေဝင်းမှ အတည်ပြု ဖြေကြားသွားပါတယ်။
ရဲဗိုလ်ချုပ် မျိုးဆွေဝင်းက “တိုင်ကြားစာကို စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီးရင် ပေါ်ပေါက်ရင် တပ်ချုပ်၊ ရဲတရားရုံးတို့ ကနေ တဆင့် ဆက်လက်အရေးယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ပြန်ပြီး ပြောပါမယ်”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအပြင် နောက်ထပ် ရဲမေ ၁၈ ဦး ဝန်းကျင်ကလည်း ရာထူးတက်ဖို့အရေး “ဒုတိယ ဗစ်တိုးရီးယား မဖြစ်ချင်ဘူး” ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ အကြီးအကဲတွေက သူတို့အပေါ် လိင်စော်ကား ထိပါးမှု ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကို တိုင်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေပါ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပြန့်နေတဲ့အပေါ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲမှူးကြီးကျော်သီဟကို မေးမြန်းရာမှာ ယခုတိုင်ကြားခံထားရသူမှာ ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ရဲမှူးချုပ် ဇော်မိုးသန်းဖြစ်ကြောင်း၊ အမှုအား စိစစ်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေမယ့် အမှု အသေးစိတ်ကို ဖြေဆိုခြင်း မပြုပါ။ “စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေဆဲပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပြောကြားလို့ မရသေးပါ”လို့ပဲ ဧရာဝတီကို ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။
ဧရာဝတီရဲ့ နီးစပ်ရာ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရဲအသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ရဲမှူးချုပ် ဇော်မိုးသန်းကို နေပြည်တော်က ရဲအချုပ်မှာပဲ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
ဒီကိစ္စဟာ စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖြစ်တာကြောင့် တရားဥပဒေအရ ဘာအမှုနဲ့ ဘယ်လို အရေးယူမယ်ဆိုတာလဲ စောင့်ကြည့်ကြရဦးမှာပါ။
အစိုးရ အဆက်ဆက်မှာကတည်းက ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်း ရာထူးတဆင့် တက်ခွင့်ရဖို့၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတွေကို မရောက်ဖို့ စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအကြီးအကဲကို လာဘ်ငွေပေးရတဲ့ အခြေအနေတွေက ရဲတပ်ဖွဲ့များကြား ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေပါ။
“ရာထူးတက်တာကတော့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့အပေါ် ကြည့်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံများတဲ့ ဌာနတွေက ရာထူးတက်တာ ပိုမြန်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံများတယ်ဆိုတာက ဌာနမှာ ဒုရဲမှူး နေရာ ဘယ်နနေရာ၊ ရဲမှူးနေရာ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး လူများများရှိတာ ကို ပြောတာ။ ရာထူးတက်ဖို့ကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ကြတာ များတယ်။ အဲဒီမှာ စကားပြောတာက နေရာဒေသပေါ့။ နေရာကောင်းရဖို့ အတွက် ငွေပေးတာတွေ လုပ်ကြတာ”လို့ အမည်မဖော်လိုသူ အငြိမ်းစား ရဲအရာရှိကြီး ၁ ဦးက ပြောပြပါတယ်။
ရာထူးတက်ခွင့်ရဖို့၊ ရာထူးတက်ပြီးနောက် နေရာကောင်းရဖို့ ငွေပေးရပေမယ့် ယခုလို လိင်အမြတ်ထုတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးကတော့ အင်မတန်ရှားတယ်လို့ အငြိမ်းစား ရဲအရှာရှိကြီးက ရှင်းပြပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပြစ်မှုထင်ရှားရင်တော့ အများအားဖြင့် ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူတာ၊ ရာထူးက ဖယ်ရှားတာ၊ နှစ်တိုး ရပ်ထားတာ စတဲ့ ပြစ်ဒဏ်များ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ယခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လိင်အမြတ်ထုတ်မှု ဖြစ်စဉ်ကတော့ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်လို့လည်း ဝေဖန် ထောက်ပြမှု တွေလည်း ရှိပါတယ်။
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေမှာ အပိုဒ် ၃ မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသူက ရာထူးတာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ တစုံတရာကို ပြုလုပ်ရန်၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ပြုလုပ်ပါက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု မြောက်တယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးရာထူး လက်ရှိဖြစ်သူမှအပ အခြားလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူ မည်သူမဆို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို ၁၀ နှစ်ထက် မပိိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကို ဧရာဝတီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ကော်မရှင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးကျော်စိုးက “ကော်မရှင်အနေနဲ့က တိုင်ကြားစာ ရောက်လာရင် ဘယ်သူတိုင်တိုင် လျှို့ဝှက်အဖြစ် သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာ ဥပဒေမှာလည်း ပါတယ်။ တိုင်ကြားစာတွေ ရောက်လာလို့ရှိရင် အထောက်အထား၊ သက်သေ၊ ဓာတ်ပုံအထောက်အထား စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှ စိစစ်ရင်း ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် အရေးယူတာတွေ ရှိပါတယ်”လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
လက်ရှိကိစ္စမှာ လာရောက်တိုင်ကြားမှု ရှိ၊ မရှိကိုလည်း ဥပဒေအရ ဖြစ်တာကြောင့် ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်း မရှိဘဲ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်အနေနဲ့ ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ အမြဲ ပြုလုပ်တယ်လို့သာ သူက ပြောပြပါတယ်။
မန္တလေးမြို့က တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦး ကတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“နဂိုကတည်းက တည်ဆဲဥပဒေကို မလိုက်နာတာ။ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြား တာ အဂတိလိုက်စားတာ။ လူတယောက်ကို ရာထူးတိုးပေးရမှာကို မတိုးပေးဘဲနဲ့ အခြားနည်းလမ်းနဲ့လုပ်တာ။ ဒါတွေက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ရှိနေသမျှ၊ မပြင်နိုင်သမျှ ရှိနေမှာဘဲ။ ရဲဆိုရင်လည်း ရဲစစ်စစ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ တပ်က အသွင် ပြောင်းတွေကနေ ရောက်လာတာ။ အဲဒီတော့ သာမန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တွေက ပုံမှန်နည်းအားဖြင့် ရာထူးတက်ဖို့ မဖြစ်နိုင် တော့ဘူး။ သူတို့ထိပ်မှာ တပ်က အသွင်ပြောင်းတွေက ပိတ်နေတာ။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ရိုးရိုးသွားလို့ မရဘူးဆိုပြီး မလျော် ကန်တဲ့နည်းတွေ သုံးတာ ”လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဆီကို တိုင်ကြားခံထားရသူ ရဲမှူးချုပ် ဇော်မိုးသန်းဟာ စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် ၂၆ မှ ဖြစ်ကာ တပ်ဘက်က ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
လက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာ တကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တာ မှန်ကန်ရင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ အရေးယူတာ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ စွပ်စွဲချက် မှန်၊ မမှန်ကို စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးသိန်းသန်းဦးက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရဲလက်စွဲနဲ့ ရဲဥပဒေတွေမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းထားတာ မရှိဘဲ အကျင့်စာရိတ္တဆိုတာ တခုကိုသာ ယေဘုယျ ဆန်ဆန် ရေးသားထားတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိပါးနှောက်ယှက်ခံရ၊ လိင်အမြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဥပဒေတွေဟာ လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေတယ်လို့ ဥပဒေကုစားရေးအဖွဲ့ မြန်မာ ရဲ့ ဒါရိုက်တာ၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်လှလှရီက သုံးသပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေများ၊ အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေကြမ်းတွေကလည်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ် ထိရောက်စွာ ကာကွယ် ပေးနိုင်တဲ့ ပေါ်လစီ၊ မူဝါဒ မရှိသေးသလို အားနည်းနေတယ်လို့ ဒေါ်လှလှရီက ထောက်ပြပါတယ်။
“အာဏာပါဝါကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၊ အလုပ်သဘော ဆက်ဆံရေး ရှိတာမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးမှုတွေအတွက် သီးသန့်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ မရှိဘူး။ ပေါ်လစီ၊ မူဝါဒ မရှိဘူး။ အဲဒီအပြင် လက်အောက်ငယ်သားက အထက်အရာရှိကို ရာဇသတ်ကြီးအရ တရားစွဲဖို့လည်း အရမ်းခက်တယ်။ ရာဇသတ်ကြီးမှာ တချို့ပုဒ်မတွေက ရဲအရေးမပိုင်တော့ ကာယကံရှင်က တရားရုံးဦးတိုက်လျှောက်ရင် အလုပ်ဖြုတ်ခံရတာမျိုး ရှိသလို လုံခြုံရေးပိုင်းကလည်း ကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူး ”လို့ ဒေါ်လှလှရီက ဆိုပါတယ်။
လတ်တလောမှာလည်း ရဲမေတွေအပေါ် ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့သော ကာတွန်းများ၊ ပို့စ်များ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်မှာ တက်လာတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီး ၁ ဦး အဖြစ် မမြင်ကြဘဲ ရာထူးတက်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးချတဲ့သူ ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ လှောင်ပြောင်ပြောဆိုမှုတွေ လည်း လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်မှာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ လိင်အမြတ်ထုတ်သူကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုထက် ကာယကံရှင်ကို ဝိုင်းဝန်း ပြစ်တင်မှုတွေက ရဲမေအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာထိပါးစေမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းစေမှုတွေကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
“ဒီဖြစ်ရပ်က မှန်ကန်နေရင် ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့သူက မဖြစ်သင့်တာကို လုပ်တာမို့ ဘယ်လိုမှကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူး။ အဲဒီအပြင် လူမှုကွန်ရက်ထက်မှာ ကာတွန်းတွေ၊ ပို့စ်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်ခံရသူကို ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ တာတွေ လုပ်နေတာတွေက သူ့ကို ထပ်ပြီး အကြမ်းဖက်သလို ဖြစ်စေတယ်။ နှုတ်ဆိတ်နေအောင် တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်နေတယ်”လို့ ဒေါ်လှလှရီက ဆိုပါတယ်။
အမည်မဖော်လိုသူ ရဲအရာရှိ ၁ ဦးကတော့ “ကျနော်တို့ တခြားဌာနဆိုင်ရာတွေကို သွားရင် ဘယ်လို မျက်နှာပြရမလဲ၊ ရဲမေတွေကို တခြား ဦးစီးဌာနတွေက ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ။ လူ့သဘောသဘာဝ အရ ရဲအရာရှိ၊ ရဲမေတွေထဲ သူတို့ကရော လွတ်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ မြင်လာနိုင်တယ်”လို့ ပြောပြတယ်။
ရိုက်တာသတင်းထောက်တွေ အမှုမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က မတရားလုပ်ခဲ့ကြောင်း တရားရုံးမှာ ဖော်ထုတ်ခဲ့လို့ တာဝန်က အနားပေးခံရသူ ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်က လည်း သဘောတူပါတယ်။
“ဒါဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အများကြီး ကျဆင်းစေတယ်။ ထိပ်ပိုင်းအကြီးအကဲ တယောက်က ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာက ယုံကြည်အားကိုးမှုကိုလည်း အားနည်းစေနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ အောက်ခြေမှာ ထိတွေ့နေရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အနေနဲ့ အများကြီး နစ်နာစေပါတယ်။ အခက်တွေ့စေပါတယ်”လို့ သူက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ရဲမေ ဖြစ်ဖို့ အသက် ၁၈ အောက်မငယ်ရ၊ ၂၅ နှစ်ထက် မကြီးရ၊ ပညာအရည်ချင်း ဒုတိယနှစ် ဖြေဆိုပြီး အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။ အရပ် ၅ ပေ ၃ လက်မ ရှိရမည်။ ကိုယ်ပေါင်ချိန် ၁၀၀ ရှိရမည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူ အပျိုဖြစ်ရမည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အခြေခံလစာ ၁၄၄၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရိက္ခာ အတွက် ၅၄၀၀၀ ကျပ် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို ရဲယူနီဖောင်း ၂ စုံ၊ မိုးကာ၊ ၁ နှစ်လျှင် ခွင့် ၁ လ ခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ခေါ်ယူပါတယ်။
အမျိုးသမီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းက စတင်ကာ ယခင်ထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးမြှင့်ခန့်ထားခဲ့ပြီး ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်စေသကဲ့သို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာန အသီးသီးမှာလည်း အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တန်းတူ တာဝန် ထမ်းဆောင်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ အမျိုးသမီး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ အမြင့်ဆုံးရရှိမယ့် ရာထူးကတော့ ရဲမှူးကြီး အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအထိ ရဲအရာရှိ ၂၈၁၇ ဦး၊ အခြားအဆင့် ၆၇၃၀ ဦးတို့ကို ပြစ်ချက်အမျိုးမျိုး အရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ရဲအရာရှိ ၁၉ ဦးကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက် ရေး ဥပဒေ အရ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
(နေပြည်တော်ရှိ အကြီးတန်းသတင်းထောက် ထက်နိုင်ဇော် ပူးပေါင်းရေးသားသည်။)
]]> ရဲဒင်းလက်စွမ်းပြပြီး ဗီလိန်ဖြစ်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး စည်ပင် https://burma.irrawaddy.com/article/2020/01/22/213568.html Wed, 22 Jan 2020 06:01:28 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=213568
မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားသော ဈေးသည်များမှ အပ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ဈေးရောင်းခြင်း၊ ခင်းကျင်းခြင်းနှင့် ကြော်ငြာခြင်း ပြုလုပ်ပါက ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၁ သောင်းမှ ၅ သောင်းကျပ် အထိ ချမှတ် ရမည်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
The post ရဲဒင်းလက်စွမ်းပြပြီး ဗီလိန်ဖြစ်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး စည်ပင် appeared first on ဧရာဝတီ.
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဈေးရှေ့မှာ အသီးတွေ ရောင်းချလို့ ဆိုပြီး ခေါင်းရွက်ဗြက်ထိုး ဈေးသည် အဘ ဦးသိန်းထွန်းရဲ့ အသီးတွေကို စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေက သူ့မျက်စိရှေ့မှာတင် ဇိမ်ပြေနပြေ ဖျက်ဆီးတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ဟာ လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ ယမန်နေ့ညက ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၇၁ နှစ် အရွယ်ရှိ ဦးသိန်းထွန်းဟာ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရုံထဲမှာ အသီးအနှံရောင်းတဲ့ ဈေးသည် အဖြစ် လုပ်ကိုင်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့် ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။
“မနေ့က အဘဆီမှာ ထိုင်းလူမျိုး ၁ ယောက်က လာဝယ်စားတော့ သူပေးတဲ့ ဘတ်ငွေ က ထိပ်နားပြဲနေလို့ ဝယ်သူကို လိုက်ရှာပြီး လဲပေးခိုင်းတုန်း အသီးဗန်းကို စည်ပင်က မရောင်းရဆိုတဲ့ နေရာမှာ ချထားမိတာ။ အဲဒါကို မရောင်းရနေရာ ရောင်းတယ်ဆိုပြီး ဖမ်းခံရတာပါ။ ဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြပေမယ့် သူတို့က လက်မခံတော့ အသီးတွေကို စည်ပင်ရုံးခန်း ၃ လွှာကို အဘ က လိုက်ပို့ပေးရပါတယ်” လို့ ဦးသိန်းထွန်းက အခြေအနေကို ရှင်းပြပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ၎င်းက “ဈေးရောင်းရတဲ့ငွေက မိသားစုအတွက် စားဖို့အတွက် ရှာရတာပါ။ မဖမ်းနဲ့ မပြောပါဘူး။ ဖမ်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာတင် အသီးတွေကို ဖျက်ဆီးတာကို အဘမှာ ထိုင်ကြည့်နေရတော့ ရင်ထဲ တော်တော် မကောင်းဘူး။ ခံပြင်းတာလည်း ဖြစ်ရတယ်” လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပြပါတယ်။
လိမ္မော်သီးရောင်းချသည့် ဈေးသည် ဦးသိန်းထွန်း ၏အိမ် /ထက်ဝေ/ဧရာဝတီ
အဘ ဦးသိန်းထွန်းဟာ လှိုင်သာယာမြို့နယ် နဝဒေးပတ်လမ်း ၂/၇ ရပ်ကွက်က ကျူးကျော်နေရာငယ် မှာ မိသားစုဝင် ၅ ဦးနဲ့ အတူ နေထိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ပေ ၊ ပေ ၂၀ ခန့် အကျယ်၊ သစ်ကြမ်းခင်း၊ ဘေးကာရံသင့်ရုံရှိတဲ့ ဦးသိန်းထွန်းရဲ့ အိမ်ငယ်မှာ မိသားစုတွေ အတူ နေထိုင်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မသန်စွမ်းသူ သမီးငယ် ၁ ဦးရှိသလို သား ၁ ဦးကလည်း ငယ်စဉ်က လှေကားပေါ်က ပြုတ်ကျရာကနေ မသန်စွမ်းသူ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ သမီးအကြီးဆုံးက အဓိက ရှာဖွေရပါတယ်။
ဦးသိန်းထွန်းဟာ မနက် ၉ နာရီခန့်မှာ အိမ်ကနေ စထွက်လာကာ သမီးအကြီးဆုံးနဲ့အတူ သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ အသီးတွေ ဝယ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအသီးတွေကို ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထိ သယ်လာပြီး နေ့လည် ၁ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီကျော် ဈေးရုံမပိတ်ခင်အထိ ဈေးထဲမှာ လှည့်လည် ရောင်းချတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အဘက ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းတောင် မသိပါဘူး။ ဈေးထဲက ဆိုင်တွေက ပြကြမှ သူတို့ တင်ထားမှန်း သိရတာ။ အဘတို့က ဖုန်းတောင်သေချာမကိုင်တတ်တာ အဲဒီလို တင်ထားမှန်း မသိလိုက်ဘူး။ တခုပဲ စိုးရိမ်မိတာက အဘကြောင့် တခြားဈေးသည်တွေကို တခုခု ထိခိုက်မိတာမျိုး ဖြစ်မှာဘဲ စိုးရိမ်မိတာ” လို့ ဦးသိန်းထွန်းက ပြောပြပါတယ်။
မနေ့က စည်ပင်ရဲ့ ဖမ်းဆီးတာကို အိမ်က မိသားစုတွေ ကို အသိမပေးခဲ့ဘူးလို့လည်း ပြောပြပါတယ်။
“အိမ်မှာကျန်နေတဲ့ သူတွေကို စိတ်မကောင်း မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် မပြောခဲ့ဘူး။ ဈေးရင်းပြုတ်သွားတော့ ညီမတွေဆီက ချေးပြီး ဒီနေ့ထပ်ရင်းရတာပေါ့။ မြို့တော်ဝန်ကြီးကိုသာ ပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင် နောက်လူတွေကို ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်” လို့ ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
မနေ့က ညနေဘက်မှာ ဦးသိန်းထွန်း တယောက် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲ ဈေးပြန်ရောင်းနေတုန်း အလှူရှင် တချို့ကလည်း ရှေ့ဆက် လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ဖို့ လာရောက်လှူဒါန်းကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
မြိတ်ကနေ ရန်ကုန်ကို အလည်လာတုန်း ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အဘဦးသိန်းထွန်းရဲ့ ရုပ်သံကို ကြည့်လိုက်ရတဲ့သူ ၁ ဦးက “ရုပ်သံကို မြင်လိုက်ရချိန်မှာ တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ သမာအာဇီဝ နည်းနဲ့ ရှာဖွေ စားသောက်နေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ၁ ယောက်ကို အခုလို လုပ်ရသလားပေါ့။ သူတို့တွေ အရေးယူတဲ့ နည်းလမ်းက မှားနေတယ်။ အဘကို အလှူငွေ ၁ သိန်း လှူလိုက်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
စည်ပင်ဖမ်းတာ ခံရတာ၊ အသီးအနှံတွေကို မျက်စိရှေ့ ဖျက်ဆီးတာတွေ ခံရတာတွေကို ဦးသိန်းထွန်းရဲ့ မိသားစုတွေ မသိခဲ့ကြပါဘူး။
ဦးသိန်းထွန်းရဲ့ သားအကြီးဖြစ်သူ က “ကျနော် အခု အလုပ်က ပြန်လာမှ ဖုန်းကြည့်တော့ အဖေ့ကိုဗျာ ထိုင်ခိုင်းပြီး အသီးတွေ ဖျက်ဆီးနေတာ ကြည့်ရတယ်။ ဘယ်လို လူတွေလဲဗျာ။ ဖမ်းတာကို ကျနော်တို့ လက်ခံပါတယ်။ အခုလို လူတယောက်ကို ရှေ့မှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး အသီးတွေပါ လုပ်တယ်ဆိုတာ ကျနော် အရမ်းစိတ်တိုမ်တယ်။ ကျနော်တို့မသိလိုက်တာကိုလည်း ဝမ်းနည်းတယ်။ ရုပ်တွေတက်လာမှ ငါ့အဖေ ဖြစ်နေတာဆိုပြီး သိရတာ။ အဖေက မပြောဘူး” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရုံအတွင်းနဲ့ ဈေးဧရိယာ တဝိုက်မှာ ရောင်းချနေတဲ့ အချို့သော ဈေးသည်တွေ အပြောအရ ၎င်းတို့ဟာ စည်ပင် ကို တနေ့လျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်၊ ဆိုင်ဖြင့် ဈေးရုံ အပြင်လမ်းကြားနေရာတွေမှာ ရောင်းချသူတွေက တနေ့ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ခန့် ပေးရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယမန်နေ့ညက စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လူထုက မြင်ရအပြီးမှာတော့ လမ်းဘေး ဈေးသည်တွေ လျော့နည်းပပျောက်အောင် လုပ်နေတဲ့ ယခုလို လုပ်ရပ်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်ကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈) ရဲ့ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် ပုဒ်မ ၃၂၀(က) အရ မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး ဈေးဧရိယာအတွင်းရှိ ဈေးရုံများတွင် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားသော ဈေးသည်များမှ အပ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ဈေးရောင်းခြင်း၊ ခင်းကျင်းခြင်းနှင့် ကြော်ငြာခြင်း ပြုလုပ်ပါက ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၁ သောင်းမှ ၅ သောင်းကျပ် အထိ ချမှတ် ရမည်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် လက်ရှိ စည်ပင်က လုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဥပဒေပါအချက်အလက်တွေနဲ့ ညီညွတ်ရဲ့လားဆိုတာ ဝေဖန်ထောက်ပြစရာ ဖြစ်လာတာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲက စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေဟာ အခုမှ ဒီလို ဖျက်ဆီးမှုတွေ လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ယခင်ကတည်းက အသီးတွေဆိုလည်း ဖျက်ဆီးပစ်တာ၊ အခြားရောင်းကုန် တွေဆိုလည်း ဖျက်ဆီးပစ်တာမျိုး လုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ အဲဒီဈေးမှာ ရောင်းချနေတဲ့ ဈေးသည်တွေထံက သိရပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ကျောက်တံတားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကြည်ပြာ တင်သွင်းသည့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း အများပြည်သူပိုင် လမ်းမများပေါ်တွင် ဈေးရောင်း၍ အသက်မွေးနေသည့်ဈေးသည်များအား မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နှင့် အညီ စနစ်တကျ ဈေးရောင်းချနိုင်ရန် အစီအမံ ကောင်းများပြုလုပ်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို တိုင်းလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ အရေအတွက် စာရင်းကောက်တာ၊ စည်းကမ်းတင်းကျပ်တာ၊ နေရာသစ် သတ်မှတ်တာတွေ ထိုစဉ်ကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာတွေမှာ ရောင်းချတဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေနဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေဟာ မကြာခဏ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ပပျောက်ရေး အတွက် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်သလို စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း အသိပညာ ပေးမှုတွေ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ သိနားလည်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို သေချာစွာ သင်ပြ ရှင်းလင်းဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
သူတို့ထုချေနေတာကို ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ခဲ့ရတာ စဥ်းစားကြည့်ပြီး တရေးမှအိပ်မပျော်ဘူး (ရုပ်/သံ)